BURMA: Online News & Analysis: US Speech on Burma's 61st Independence Day
မြန်မာနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံး သမ္မတ စပ်ရွှေသိုက် ကို ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ၌
နိုင်ငံတော် အလံ ကို လွှင့်ထူစဉ် တွေ့မြင်ရပုံ
WASHINGTON (AFP) - The United States on Friday highlighted its support for efforts to establish democracy in military-run Myanmar , ahead of the country's 61st anniversary of independence.State Department spokesman Sean McCormack alluded to the human rights crackdown by the military junta that has been in power since 1962, as he commemorate the anniversary of independence from Britain on January 4, 1948."We wish to express our warmest wishes to the people of Burma on this occasion," McCormack said inastatement, referring to the country's name before the junta changed it to Myanmar in 1989."As we reflect on Burma's independence struggle, led by General Aung San, we are reminded of our own history," the statement said, alluding to the US drive for independence from Britain in the 18th century."We support the peaceful efforts of people everywhere to exercise freely their universal humanrights," he said.
"We earnestly hope that day will come soon," according to McCormack's statement..
လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သို့သွားရောက်ပြီး လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုစဉ်
အမေရိကန် အစိုးရမှ ၆၁ နှစ်မြောက် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အကြို၊ သောကြာနေ့ ၌ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှ မြန်မာပြည် အား ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ရေး အတွက် ထောက်ခံကြိုးစား သွားမည် ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးရုံး မှ ပြောပိုင်ခွင့် ရှိသူ ရှောင် မက်ကွမ်မက် က မြန်မာ လွတ်လပ်ရေး နှစ်ပတ်လည်၌ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မှ စတင်ခဲ့သော စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များကို ရှုံ့ချသွားခဲ့ပါသည်။
“ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဤအခါသမယ မှာ မြန်မာပြည်သူများ အတွက် ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းဟာ ကျနော်တို့ ၁၈ရာစု က အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ဘ၀ က လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု နဲ့ အလားတူပါဘဲ” ဟု မက်ကွမ်မက် က ဆိုခဲ့ပါသည်။
“ကျနော်တို့ ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လူအခွင့်အရေးတွေ ရဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေတာတွေ ကို ထောက်ခံပါတယ်၊ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတို့နဲ့ တကွ ရပ်တည်ထောက်ခံ နေခြင်းဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး နဲ့ တိုင်းပြည်သာယာဝပြောရေး ဖော်ဆောင်ကြိုးပမ်းမှု့ များ ကိုလေးစားဂုဏ် ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။”
“ အဲဒီတနေ့ ဟာလည်း အမြန်ဆုံး ရောက်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ မျှော်လင့်နေကြ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် ပေါ်ထွန်းရေးကို အမေရိကန်အစိုးရ အနေနှင့် အားသွန် ခွန်စိုက် ကျိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” မက်ကွမ်မက် က ပြောဆိုသွားပါသည်။
သူ၏မိန့်ခွန်းများ ၌ နအဖ အဓမ္မ ပြောင်းလဲထား သော Myanmar အစား Burma ဟူ၍သာ တောက်လျှောက် သုံးသွားခဲ့ပါသည်။
Posted by Burma Golf Club at 3:47 PM